ओली फेरि सत्तामा आए कसैलाई नछोड्ने — Imandarmedia.com
ओली फेरि सत्तामा आए कसैलाई नछोड्ने
काठमाडौँ। पूर्वप्रधानमन्त्री समेतरहेका अध्यक्ष नेपालले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाललाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग बनाएर सिध्याउने काम गरेको तर आफूहरुले बचाएको दाबीसमेत गरे।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एकीकृत प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, नेपालको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै उनले ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकामा गएर नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग बनाउने समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको तर आफूहरुले विरोध गरेपछि अमेरिकाले हटाएको बताए।
नेपाललाई इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंग बनाएर ओलीले सिध्याउने प्रयास गरे पनि आफूहरुले विरोध गरेर बचाएको अध्यक्ष उनको तर्क थियो। फेरि ओली सत्तामा आए इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंग बनाएर नेपाललाई सिध्याउने आरोप लगाउँदै उनले त्यसो हुन नदिन पनि सत्तारुढ गठबन्धनलाई जोगाउन लागि परेको बताए।
ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई महाअभियोग लगाएर हटाउने सोच राखेको भन्दै नेपालले आक्रोशसमेत पोखेका छन्। अध्यक्ष नेपालले भने, वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको एउटा गठबन्धन अहिलेसम्म छ।
के होला भोलि भन्ने सबैको मनमा कौतुहल चलिरहेको छ। र, कतिपयले त तुरुन्तै भत्काउनुपर्छ भनिराखेका छन, सर्त राखेर। पूर्वाग्रहपूर्ण सर्त छ। सभामुखलाई सिध्याउनुपर्छ महाअभियोग लगाएर, मुन्ट्याएर निकाल्नुपर्छ।
माधव नेपालसहितको १४ जनालाई सिध्याइदिनुपर्छ। मुन्टयाएर निकालिदिनुपर्छ। कस्तो अपराधपूर्ण चिन्तन ? अनि यस्ता चिन्तन राख्ने मानिसहरु पानीमुनि लुकेर बसेका छन् भने पनि सिध्याउछु भनेर कराउँछन।
यस्ता खालका तत्वहरु नेपाली समाजमा, राजनीतिमा कहाँबाट आए ? एमसीसीलाई यथास्थितिमा पास गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै नेपालले भने, ‘एमसीसी कहाँ-कहाँ जोडिएको छ त ? यो इन्डोप्यासिफिक अंग बनाएर आएको छ । यो अंग बनायो कसले ?
वामपन्थी भनिने केपी ओलीको आफ्नै मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गएर नेपाललाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग बनाउने कागजमा सही गरेर आए। त्यसपछि नेपाल त्यसको अंग बन्यो। पछि श्रीलंकाको नाम काटियो।
नेपालको नाम रह्यो। जब नेपालमा त्यसको हामीले जोडदार विरोध गर्यौ। त्यसैको कारण अहिले बल्ल त्यसमा नेपालको नाम काटिन पुगेको छ। यो नेपाली जनताको संघर्षबाट भएको हो । केपी ओलीले सिध्याइसकेका थिए।
नेपाललाई इन्डोप्यासिफिक अंग बनाउनका लागि। केपी आएपछि त फेरि सिध्याइदिन्छन्। फेरि बनाइदिन्छन। त्यो हुनाले हामी रह्यौं भने त्यो बन्दैन।अध्यक्ष नेपालले यथास्थितिमा एमसीसी संसद्‍बाट पारित गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको पनि दोहोर्‍याए।
प्रतिपक्षी एमालेको विरोध हुँदाहुदै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भयो । तर देशमा सर्वार्धिक चासो र चर्चामा रहेको विषयमा कांग्रेसले आफ्नो अडान प्रमाणित गर्दा एमालेले भने त्यो अवसर गुमाएको छ।
एमाले ‘न भाले न पोथि’: अर्थात प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै एमसीसी जस्तो विषयमा अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। त्यसै कारणले नेकपा एमालेलाई न भाले न पोथि भन्दै कतिपयले आलोचना गर्न थालेका छन्।
सर्वाधिक चासो चर्चा, आलोचना र विवादका बीच नेपाली कांग्रेसको अडानकै कारण अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट पास भएको छ ।
आफ्ना चरम अन्तुष्टिका बावजुत पनि सत्ता घटक नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादी समेत व्याख्यात्मक घोषणाका आडमा एमसीसीको पक्षमा देखिदाँ प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने अझै अलमलमै छ।
कुनै समय एमसीसी नपढेकाहरुले विरोध गरेको बताउने केपी शर्मा ओली निर्णायक समयमा भने न सदनमा देखिए न त सडकमा नै । एमसीसी निणर्यार्थ संसदमा पेश हुँदा डा।भीम रावल लगायतका केहिले व्यक्तिगत रूपमा विरोध गरे पनि एमालेले धारणा नै बनाएन ।
एमसीसीलाई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री देउवाले प्रयास गर्दा सत्तारूढ गठबन्धनको धारणा सार्वजनिक भएपछि निर्णय गर्ने बताएको एमालेले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बेलासम्म कुनै धारणा सार्वजनिक गरेन ।
एकै दिन दुईओटा संसद चल्दा समेत एमसीसीको विरोधमा एउटै पनि नारा लागेन भने एमाले संसदीय प्रक्रियाबाटै अलग बस्यो । अर्थात प्रमुख प्रतिपक्षी विवादित बनेको एमसीसीबाट पन्छियो अनिर्णयको बन्दी बन्यो । जुन
एमालेको गैरजिम्मेबारीको परकाष्टा भएको एमसीसीको विषयमा वोल्दै आएका डा।सूर्यराज आचार्यको भनाई छ ।
बैठकको सुरुमा एमालेका अध्यक्ष ओली आफैं वेलमा थिए । अरू दिन विरलै देखिने ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेललगायत सांसद पनि पूरै समय वेलमा रहे तर उनीहरूले नारा लगाएनन् ।
एमाले सांसदले संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर’ ‘हाम्रो विरोध जारी छ’, ‘गैरसांसदलाई प्रवेश निषेध गर’, ‘पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र मुर्दावाद’ जस्ता नारा लगाइरहँदा पूर्वसभामुख तथा ससदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले
कहिले टेबलमा अडेस लगाएर त कहिले वेलमा उभिएर नारावाजीको अवलोकन गरिरहेका थिए।
जसको सम्बन्धन एमसीसी पास गर्ने तर, अपजस नलिने एमालेको रणनिति थियो। जनस्तरमा उठेको विरोधलाई हेक्का राख्दै एमसीसीको पक्ष÷विपक्षमा नउभिने तर, एमसीसी पारित गर्न सहजीकरण गर्ने रणनिति अनुसार
एमालेले आफ्नो अंकगणितलाई एमसीसी पारित गराउन प्रयोग गरेको गर्यो। यसअघि नै एमालले आफ्नो कित्ता प्रष्ट पार्दिएको भए एमसीसी यसअघि नै वारपारको स्थितीमा पुग्ने विश्लेषका वीच आईतबार पनि एमाले एमसीसीको साक्षी मात्र बस्यो।
तर एमालेका नेताहरुले भने आफूलाई एमसीसीको प्रक्रियाबाट विमुख बनाइएको प्रतिक्रिया दिएर पन्छिएका छ । आफूहरु लामो समयदेखि कुनै प्रक्रियामा सहभागी नभएका कारण हुन्छ हुन्न भेन्नेमा सामेल हुने अवस्था नभएको बताँउदै,
उनीहरुले ढोका बन्द गरेर भित्र आउ भनिएको टिप्पणी गरेका छन। यसअघि देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई गलाउन वाल्कोट मुभ गरेका थिए।
जुन समयमा ओलीले समेत एमसीसीको विषयमा कांग्रेससंगएकमत रहेको वोल्न भ्याए। यद्यपी घटनाक्रमले एमाले पनि एमसीसीको पक्षमा रहेको प्रष्ट छ।